Na-akwalite iPhone App gị na Smart Banner Smart | Martech Zone
Na-akwalite iPhone App gị na Smart Banner Smart
Tọzdee, Nọvemba 29, 2012 Tọzdee, Machị 7, 2013 Douglas Karr
Ndị mmekọ anyị na Postano Ekwentị, ndị folks ndị wuru iPhone App anyị, bụ ndị ekwenye ekwenye na ha ga-arụ ọrụ ma wuo ngwa dị egwu. Ọ bụrụ na ị chọpụtaghị ya, biko mee! Anyị enwetala vidiyo anyị na ngwa a ugbu a - ị nwere ike pịa ma kpọọ ha ozugbo site na ngwa ahụ… dị mma!
Ọ bụrụ na ịmaghi ihe id ngwa gị bụ, ịnwere ike ile ya anya iTunes Link Onye kere. Ọ bụ nọmba mgbe id na tupu akara akara. Nke anyị bụ 498000390.
Ozugbo i tinyere mkpado meta, nsonaazụ ya dị oke mma. Safari na-agbakwunye ọkpụkpọ omenala iji mee ihe na ngwa iPhone gị nke na-enye onye ọbịa gị ohere itinye ngwa gị ozugbo na Smart App Pụrụ Iche!
Tags: ios 6iphonengwa iphonepostanopostano mkpanaakasmart ngwa ọkọlọtọsmart ọkọlọtọ
10 Holiday Deliverability Atụmatụ
Talọ oriri na ọ Mobileụ Mobileụ Mobile Social Consumer Trends 2012